Nezvedu | Shandong Limeng Pharmaceutical Co, Ltd.
Shandong Limeng Pharmaceutical Company yakavambwa muna1993, ikozvino yave neyechinyakare yechinyakare Chinese mushonga, chikafu-chekuchengetedza chikafu, zvigadzirwa zvekugadzira zvigadzirwa, zvigadzirwa zvekurapa uye zviridzwa musangano, sterilization inopa workshop uye yechinyakare Chinese mushonga wekuchera musangano, uye ese akapfuura. zana-chiuru chekuchenesa musangano chitupa. Iyo kambani yanga yakagara yakanamatira kune yekusimudzira pfungwa yeepamusoro-tech kutungamira, uye indasitiri-yunivhesiti-yekutsvagisa kudyidzana. Iyo ine timu yehunyanzvi yeR & D timu, musana wehunyanzvi uye mahunyanzvi. Iyo kambani inovavarira kuvandudza iyo brand zano, uye iyo mhando "Limeng" yakapihwa seMasipereti Anozivikanwa Anomaka Jinan muna 2012.
Parizvino kambani iyi ine zvekushandisa zvekurapa uye zviridzwa musangano unopfuura zviuru zviviri zvemamirimita, chiyero chehutano-chekuchengetedza chikafu chegumi remamirioni emamirimita, uye mafomu edhisheni anosanganisira macapsule, piritsi, granules uye hupfu nezvimwewo Kuti uwedzere kugona kwekugadzira chekambani, kunatsiridza mhando uye chimiro chezvigadzirwa, kambani yedu yakawedzera hombe yekugadzira hwaro hweanopfuura 30,000 mativi emamirimita, mhando dzekugadzira dzinofukidza akawanda ezvikamu eg echinyakare Chinese mushonga kuburitsa nekudzika kugadzirisa, zviwitsi, zvekukurumidza chikafu, chinotsiva tii, zvigadzirwa zvemukaka, mhinduro yemumuromo, emplastrum, zvizoro, chikafu chinoshanda uye zvekuzorora chikafu nezvimwe.
Hardware Chishandiso cheLimeng Chemishonga
Iyo kambani ine mashanu akajairwa mashopu parizvino, mune iyo yehutano-yekuchengetedza chikafu musangano ndeye 2,000 mativi emamirimita, cosmetics semusangano ndeye 2,000 mativi metres uye QS yekugadzira musangano ndeye 3,000 mativi metres, zvokurapa zvishandiso uye zviridzwa kutarisana nemasikisi musangano ndeye 200 mativi metres, disinfection uye mbereko yechigadzirwa musangano ndeye chiuru mita metres. Kirasi yehutsanana yemusangano inogona kusvika zviuru zana, uye ivo vese vakapasa gwaro reShandong Provincial Food uye Drug Administration.
Parizvino zvishandiso zvekurapa uye zviridzwa musangano ine mashanu akazara-otomatiki kumeso kugadzirwa kwemitsara neyakagadzirwa yekugona inosvika mazana mana emazana. Iyo inorasika inodzivirira kumeso mask uye kuraswa kurapa masiki vese vakapfuudza kuonekwa.
Iyi musangano wekuchengetedza nezvehutano ane anopfuura makumi maviri epamberi kapuleti, piritsi, granule, mishonga yekurapa tii mitsara, uye otomatiki kurongedza mitsara, iyo inogona kuburitsa angangoita makumi mashanu emapato eina mafomu eiyero. Iyo kambani iri kuva nemaseti anopfuura makumi manomwe emidziyo yekubvisa uye anopfuura makumi maviri makapisi ekugadzira mitsara ine yegore yekugona kugona ndeye bhiriyoni rimwe; Iyo ine mishanu mahwendefa ekugadzira mahwendefa aine wepagore ekugona kugona ndeye 200 mamirioni; Izvo zvichiteerana ine gumi granule yekugadzira mitsara uye gumi ekurapa tii yekugadzira mitsara ine yegore yekugona kugona ndeye mazana matatu.
Kune akati wandei seti eemhando yepamusoro michina yekugadzira iyo inogona kuburitsa iyo yakazara mvura unit uye kirimu & lotion unit mune yekuzora musangano, uye zvigadzirwa zvinosanganisira ruoko sanitizer, sanitizing gel, uye kumeso kumeso nezvimwe zvinopisa zvigadzirwa.
Izvo zvinoteedzana zvine imwechete yekunwa musangano uye 1 zvihwitsi QS chitupa musangano. Kubudikidza nekuunza iwo akazara-otomatiki ekugadzira michina kumba nekune dzimwe nyika, mafomati ayo anowanikwa anosanganisira chinwiwa chakasimba, gel candy, piritsi pipi nezvimwe.
Iyo kambani ine vanopfuura vashandi ve200 pari zvino, umo mune makumi matatu manejimendi vashandi, makumi matatu evatsvakurudzi vesaenzi, 50 vekutengesa vashandi uye vanopfuura 150 vashandi vekugadzira. Vese manejimendi uye vesaenzi vanotsvagisa vane dhigirii rekoreji kana pamusoro, umo vanhu gumi nevatatu vane mazita epamusoro ehunyanzvi uye vanhu makumi maviri neshanu vane mazita epakati-giredhi ezvehunyanzvi; vashandi vezvigadzirwa vese vadzidzi vakapedza kudzidza kubva kumakoreji ekurapa nemishonga eDunhu reShandong, pamwe nekutanga basa pamusoro peanodzidziswa anokwanisa.
Iyo kambani inotsigira bhizinesi manejimendi manejimendi "Kupona paMhando, Kukudziridza paChikwereti, Yakanangana neTekinoroji, Mhindu paManagement". Iyo inonyatso kushandisa inoenderana mitemo uye nemirau mirau yekugadzira uye manejimendi, inosuma yepamusoro manejimendi maitiro ekunyatso kusanganisa tekinoroji, kugadzira, musika mubhizinesi, uye inowana zvakakosha mhedzisiro, iyo inoisa hwaro hwakasimba hwebhizinesi kukura kune imwe nhanho nyowani uye gadzira yakajeka makore.